विदेश उड्न ठिक्क परेर विमानस्थल पुगेका डेढ सय यात्रु घर फर्किनु पर्दा…. – Dainik Samchar
August 11, 2021 416
काठमाडौँ / म’हामारीलाई देखाएर विभिन्न मुलुकले लागु गरेको आआफ्नै नियमका कारण नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान समस्या खेप्दै आएका छन्। पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेटस् युएईले लागु गरेको नयाँ नियमका कारण सोमबार डेढ सय यात्रु दुबई जानबाट रोकिए।
युएई सरकारले पछिल्लो समय सं’क्रमण बढेका संसारका १६ मुलुकलाई जो’खिमको सूचीमा राखेको छ। यही सूचीमा रहेका मुलुकबाट आउनेहरूका लागि नयाँ नियम लागु गरिएको हो। नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, श्रीलंका र युगान्डालाई अति जो’खिम भएका देशको सूचीमा राखिएको छ। यो नयाँ नियमका कारण नेपालबाट दुबईमा हुने उडान अनिश्चित बनेको छ। दुबईबाट नेपालमा हुने उडान भने यथावत् छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevसुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
Nextओलीले नपत्याएका कुलमानले केहि बेरमा नियुक्ति पत्र पाउदै